Puntlandtimes (Muqdisho)-Ilo xogagaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo werinaya in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu go’aan ka qaatay doorashada Soomaaliya, kadib cadaadis kaga yimid musharixiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya.
Madaxweyne Qoorqoor oo xalay kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo, RW Rooble iyo taliye Fahad Yaasiin ayaa saraakiil katirsan Villa Somalia sheegeen inuu go’aan saday ka shaqaynta dib u doorashada madaxweyne Madaxed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhanka kalena, kulamo ay Qoorqoor la qaateen Musharixiinta Madaxweynaha ee kasoo jeeda Galmudug oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Xasan Sheekh, Ra’iisal wasaarihii hore Xasan Kheyre, C/kariin Xuseen Guuleed, C/raxmaan C/shakuur iyo xubno kale ayaan loo fulin qaabkii la filayey iyadoona uusan dheg jalaq u siin.
Si lamid ah Qoorqoor madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo dhowaan la kulmay ra’iisul Wasaare Rooble ayaa la sheegay inuu taageeray madaxweyne Farmaajo uusanna la dhacsanayn dalabaadka hoggaamiyayaasha mucaaradka ah.
Madaxxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo dhoweeyey go’aamada mucaaradka wuxuuna sheegay inuu bedeli doono xubnaha ay ka cabanayaan halka madaxweynaha Puntland uu shuruud kaga dhigay inuu bedeli doono haddii ay bedelaan DFS iyo dowlad goboleedyada kale.
Brent’s umada kadaaya